Shariif Sheekh Axmed oo Muqdisho Kusoo Wajahan iyo is xulufaysi ka dhan ah Xasan Gurguurte oo Bilaawday.
Tuesday March 15, 2016 - 11:24:31 in Wararka by Super Admin
Magaalada Muqdisho waxaa lagasoo sheegayaa in xulufaysi siyaasadeed oo ka dhan ah hoggaanka Xisbiga Damul Jadiid oo majaraha u haya dowladda Federaalka.
Xilli ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada dowladda Federaalka ayuu Xasan Gurguurte wajahayaa isbahaysi siyaasadeed oo xisbigiisa ka dhan ah.
Shariif Sheekh Axmed oo horay usoo hoggaamiyay DF-ka iyo siyaasiyiin ay isku beel yihiin ayaa dhaq dhaqaaq siyaasadeed ka wada Muqdisho waloow ay dibadda ku maqanyihiin hadane waxay wadaan isku xir ballaaran.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in maleeshiyo beeleed taabacsan Cali Mahdi iyo Shariif Sheekh Axmed lagu diyaariyay xaafado katirsan waqooyi Bari ee magaalada Muqdisho iyo deegaano shabeelaha dhexe katirsan.
Ciidamadan oo abaabulkooda ay wadaan saraakiil katirsan DF-ka oo taageersan Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu arkayaa degmooyinka Yaaqshiid,Kaaraan Shibis iyo Shangaani.
Warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in Shariif Sheekh Axmed uu maalmaha soo socda kusoo wajahanyahay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Cali Mahdi ayaa isna loolanka qeyb ka ah waxayna wadaan isbahaysiyo siyaasadeed oo ka dhan ah Xasan Gurguurte, mid kamida siyaasiyiinta abaabulkan wada ayaa sheegay in ciidamada la aruuriyay ay sugi doonaan ammaanka Shariif Sheekh Axmed.
Siyaasiga Cabdi Cadde oo Muqdisho ku sugan ayaa SomaliMeMo u sheegay in Cabdi Raxmaan Tuur Yare Taliyaha Naba sugidda uu wado qorshayaal uu ku kala furfurayo abaabulka socda waxaana laga yaabaa in dagaallo beeleedyo ay ka dhacaan waqooyiga Muqdisho.
Shariif Sheekh Axmed ayaa taageera ka helaya boqolaal askar iyo saraakiil ah oo DF-ka katirsan kuwaasi oo mucaaradsan Xasan Gurguurte.
Wararka qaar ayaa sheegaya in siyaasiyiinta ku howllan isbahaysigan cusub ay lacago boqolaal kun oo dollar ah mushaar ahaan usiiyeen saraakiil iyo ciidan ku hoos gaajooday maamulka Xisbiga Damul Jadiid.
Cabsida ugu daran ee haysata Xasan Sheekh ayaa ah in ciidamada shisheeyaha AMISOM ay waardiyeeyaan Shariif Axmed Haddii uu Muqdisho soo gaaro arrinkaasi oo saameyn dhanka siyaasadda iyo ammaanka ah ku yeelan doono Villa Somalia.
Taliye ay isku dhowaayeen Xasan Cali Kheyre oo shaqada laga eryay.
Xasan Cali Kheyre oo aan xilka ku wareejin R/wasaare Rooble.